यस भाइरसबाट बच्नका लागि प्रमुख उपाय भनेको साबुन पानीले हात धुने र संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहनु पर्छः रोल्पा अस्पताल प्रमुख डाक्टर धनमाया घर्ती – रोल्पा समाचार
२०७६ चैत्र ९, आईतवार १४:२० गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ चैत्र ९, आईतवार १४:२० गते
रोल्पा अस्पताल रेउघा
प्रमुख डाक्टर धनमाया घर्ती
छिमेकी राष्ट्र चीनबाट उत्पन्न भई अहिले विश्वभरिका धेरै राष्ट्रहरुमा कोरानो भाइरसले माहामारीको रुप लिएको छ । यस भाइरसकै कारण धेरै मानिसहरुको मृत्यु भई सकेको छ । भने धेरै मानिसहरु यस भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारमा छन् । विश्वको विकसित राष्ट्रहरुमा भाइरसको नियन्त्रण नहुँदा विकासन्मुख राष्ट्र नेपाल सहितका अन्य राष्ट्रका नगरिकहरुको मनोविज्ञानमा प्रभाव परेको छ । विकासित राष्ट्रहरुले यस खोपको उत्पादन प्रयत्न गर्दै छन् । तर, अहिलेसम्म यो भाइरस खोप तथा औषधी उत्पादन भएको छैन । यो भाइरसबाट प्रभावित राष्ट्रहरुले बच्ने उपायलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले पनि यस भाइरसबाट बच्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेको छ । साथै भाइरसबाट व्यक्तिको मनोविज्ञानमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरणको निम्ति सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले सहजिकरण गर्दै आएका छन् । रोल्पा अस्पताल रेउघा रोल्पाको कार्यालय प्रमुख डाक्टर धनमाया घर्तीसँग कोरोना भाइरसको लक्ष्यण, बच्न उपाय सहितका विषयवस्तुमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
हजुरलाई पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ ।
यस जिल्ला हावापानीको दृष्टिकोणले भाइरसको कति जोखिममा छ ?
हावापानीको दृष्टिकोणबाट कोरोना भाइसरसँग सम्बन्ध छैन भन्न सकिदैन । किन कि यस भाइरस चिसो हावापानीमा फैलिन सजिलो हुन्छ । भने गर्मी हावापानी यस भाइरस फैलिन प्रतिकूल अवस्था रहन्छ । त्यसैले यस जिल्लाको हावापानी पनि चिसो भएको हुँदा यस भाइरसका लागि अनुकूल मौसम छ ।
यो भाइरसको लक्षणहरु के–के हुन् ?
यो भाइरसको संक्रमण भएको हुँदा अन्य भाइरसको जस्तो रुघा खोकी, ज्वरो आउनु, कसैलाई लक्षण पनि नदेखिन सक्छ, स्वास प्रश्वासमा समस्या, निमोयाका लक्षणहरु हुन् ।
भाइरसबाट बच्ने उपायहरु के–के हुन् ?
यस भाइरसबाट बच्नका लागि संक्रमित व्यक्तिहरुले हाछ्यु गर्दा किटाणुहरु भएको ठाउँमा अन्य व्यक्तिको हातले छुदा स्वस्थ मानिस पनि संक्रमित हुन सक्छन् । त्यसैले यस भाइरसबाट बच्नका लागि प्रमुख उपाय भनेको साबुन पानीले हात धुने, संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहने, रुघोखोकी संक्रमित व्यक्तिहरु अस्पताल गएर जोखिम लिनुभन्दा पनि आफ्नै घरमा विशेष ख्याल पु¥याउन, उच्च ज्वरो आएमा अस्पतालमा जानु पर्छ, स्वस्थकर खाने कुरा खाने, सरसफाईहरुमा ध्यान पु¥याउने, सभा समाहोरमा सहभागि नबेको अवस्थामा यस भाइरसबाट बच्ने सक्ने उपायहरु हुन् ।
भाइरसले खासमा कुन–कुन उमेर समूहलाई प्रभावित गर्दछ ?
यस भाइरसले सबैलाई संक्रमित गर्न सक्छ । यस भाइरसको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको उमेर बढिभएका वृद्वा वृद्वि, सुगरको विरामी, पे्रसरको विरामी, क्यान्सरका विरामी, साना बालबालिकाहरुलाई छिटो संक्रमितको सम्भावना बढी रहन्छ ।
यो भाइरसको उपचार सम्भव छ कि छैन ?
अहिलेसम्म यो भाइरसको औषधी नै उत्पादन भएको अवस्था छैन । विश्वका विकासित राष्ट्रहरुले पनि यस भाइरसबाट बच्न र बचाउने कुरामा ध्यान दिएको अवस्था छ । त्यसैले यस भाइरसको औषधी उत्पादन भएको छैन । भने विकासित राष्ट्रहरुले यस भाइरसको औषधीको अनुसन्धान गरी रहेका छन् । यस भाइरस विरुद्धको खोपा वा औषधी छैन । यस भाइरसको लक्षणको आधारमा उपचार हुँदै आएको छ । यो व्यक्तिगत आनिबानीमा ख्याल पु¥याउन सकिन्छ । तर, यसले माहामारीको रुप लियो भने धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ । अहिलेसम्म यस भाइरसको उपचार अन्य रोगको जस्तो पूर्ण रुपमा भएको छैन । भने यस भाइरसबाट बच्ने उपयाहरु अबलम्बन र विरामीको उपचारमात्र भएको छ । भाइरसको संक्रमितबाट बच्न कस्ता खानेकुरा खानु पर्दछ ?
यो खानेकुरा खाएपछि बच्न सकिन्छ भन्ने अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । तर, समग्र भाइरसको विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासको लागि भिटामीनयुक्त खानेकुरा हरियो सागपात, फलफुल, प्रयाप्त पानी पिउने, दुध, दही, अण्डा जस्ता भिटामीनयुक्त खानेकुराहरु खादा स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा हुन्छ ।
यो बेला आयत फलफुल सहित अन्य खाने कुरा खादा के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
विभिन्न ठाउँबाट आयत भएका फलफुलहरु ब्जारमा प्रयाप्त उपलब्ध छन् । ति फलफुलहरु खानुभन्दा अघि पटक पटक पानीले सफा गरी खानु पर्छ । यदि आयत फलफुलहरु पानीले सफा नगरी खादा विभिनन विषादीले स्वास्थ्यमा असर पु¥याउँद छ । यो बेला आफ्नै ठाउँको फलफुल तथा खानेकुराहरु खादा सुरक्षित भयो ।
संक्रमित व्यक्तिले कुन–कुन खानेकुरा सेवन गर्नु पर्दछ ?
यस भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरुले झोलिलो खानेकुरा, तातो खानेकुरा, भिटामीनयुक्त खोनकुराहरु, आराम, व्यक्तिगत सरसफाई, आनिबानी र ज्वरो अनुसारको औषधीहरु खान समयमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अस्पतालमा पूर्व तयारीको अवस्था के छ ?
यस अस्पताले आइसुलेशन कोठाको व्यवस्था गरेको छ । आधुनिक ज्वरो नाप्ने मेसिन, माक्स सहित अन्य आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिको विदा, सुत्केरी विदा र क्रिया विदा बाहेक अन्य समयमा विदामा अस्पतालको कर्मचारी विदामा नबस्ने निर्णय भएको छ । यस अस्पतालको आइसुलेसनले कोरोना भाइरसको विरामीको चाप थाम्ननै नसक्ने अवस्थालाई मध्येनजर नगरी उपचारमा आवश्यक सामाग्री, स्वास्थ्य विभाग र प्रदेश निर्देशनालयमा अस्पताले चिठी पठाएको छ । यो अस्पताल १५ वेदेदको अस्पताल हो । सोही अनुसारको यस अस्पतालमा जनशक्ति उपलब्ध छ । भने सोही वेदेद अनुसार भौतिक संरचनाको व्यवस्था छ । त्यसैले यस अस्पतालमा दैनिक ३०÷४० विरामी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था अस्पतालको क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्था हो । अहिलेसम्म अस्पतालमा सामान्य उपचारको लागि औषधीको व्यवस्था छ । तर, यस भाइरसबाट माहामारी नै फैलियो भने उपचारको लागि आवश्यक जनशक्ति र औषधीको माथिल्लो निकायमा माग गर्नु पर्दछ ।
जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहन्छ ?
यस अस्पतालबाट डाक्टर सपना कर्णको नेतृत्वमा २ ओटा विद्यालयमा पुगेको कोरोना भाइरस सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । रोल्पा नगरपालिका कार्यालय रोल्पाको निमन्त्रणामा नगरपालिको एक कार्यक्रममा डाक्टर सपना कर्णले यस भाइरस सम्बन्धि सहजिकरण गर्नुभएको थियो । साथै यस अस्पतालको डाक्टर अनिल के.सी. र डाक्टर सपना कर्णले सामुदायिक रेडियो मालश्रीमा यस भाइरसको लक्षण र बच्ने उपाय सम्बन्धि अन्तर्वाता सहभागिता हुनुभएको थियो । हरेक दिन यस अपस्तालामा स्वास्थ्य परीक्षणमा आएका विरामीहरुलाई समेत यस भाइरसको लक्षण र बच्ने उपायहरु जानकारी दिँदै आएका छौं ।
संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण अस्पतालमै हुन्छ कि जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्छ ?
हो, भाइरसको लक्षण पत्ता लगाउनका लागि संक्रिमतको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था यस अस्पतालमा छैन ।विरामीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नै पठाउनु पर्छ । त्यो पनि विशेष तरिका अपनाएर २ देखि ४ सेन्टेग्रट तापक्रममा उक्त प्रयोगशालामा पठाई सक्नु पर्छ ।
यो भाइरसको व्यापक प्रचार प्रसारकै कारण पनि मानिसहरुको मनोविज्ञानमा प्रभाव परेको बेला यस जिल्लाका स्थानीयतहका स्वास्थ्य शाखाहरु र नागरिकहरुले के कुरामा ध्यान पु¥याउन पर्छ ?
संघीय सरकारले यस भाइरसबाट बच्नकै लागि नीति नै लागू गरेको छ । त्यो नीति सबैले लागू गर्नु पर्छ । यस भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न समाचारहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा सहजै उपलब्ध हुँदा पक्कै पनि मनोविज्ञानमा नै प्रभाव परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पुगेको व्यक्तिहरुले पनि त्यस्ता कुराहरुमा धेरै ध्यान दिन आवश्यक छैन । किन भने सबै कुराहरु सत्यतामा आधारित हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा यस भाइरसबाट बच्ने उपायहरु बाहेक अन्य समाचारहरुप्रति चाँसो राख्नु हुँदैन । बच्ने उपचायहरुलाई अबलम्बन ग¥यौं भने यस भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । यस जिल्लाका स्थानीयतहका स्वास्थ्य शाखाहरु पनि भाइरसको त्रासपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण कुराहरुको सहजिकरण गर्दै सहज वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ, । यस भाइरस सम्बन्धि जनचेतामूलक कार्यक्रमहरु प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले आम मानिसहरुमा बढेको भाइरसको नकरात्मक सन्देश न्यूनिकरण भई सकरात्मक सोचको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ ।
अन्तिममा केही कुरा छुटेका छन् ?
सर्व प्रथम त कोरोना भाइरस सम्बन्धि धारणाहरु पाठकसम्म पु¥याउने अवसर दिनुभएकोमा यस पत्रिकाको सम्पूर्ण पत्रिकाको टिमलाई रोल्पा अस्पताल रेउघा रोल्पाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यो भाइरसको रोकथाममा विश्वका विकसित राष्ट्रहरुलाई कठीन भएको अवस्थामा विकासन्मुख राष्ट्र नेपालमा यसले माहामारीकै रुप लियो भने रोकथाममा आफैमा कठीन हुनेछ । त्यसैले यो भाइरसबाट संक्रम नहुन दिनुनै सर्वतम उपाय हो, विकासन्मुख राष्ट्र नेपालका लागि । यो भाइरसबाट बच्नका लागि अपनाएका उपायहरुलाई अबलम्बनका लागि म सबैलाई यस पत्रिका मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ आश्विन ३०, बिहीबार १२:५० गते
लिबाङ रोल्पा असोज ३० गते । ग्लोबल आइएमई बैंक लिबाङ र समिप मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक सेन्टर लिबाङ बीच भ्बकथ द्यगथ भ्बकथ...